12.1 Fameperana géometrika - Geofumed
Araka ny efa nambarantsika, ny fetra ara-jeômetika dia mametraka ny rafitra sy ny fifandraisana ara-jeômetika amin'ny zavatra mifandraika amin'ny hafa. Andeha hojerentsika ny tsirairay:
Ity fameperana voafantina manery ny faharoa zavatra mba mitovy hevitra amin'ny foto-kevitra sasany amin'ny fotoana iray ny zavatra voalohany. Rehefa mifindra ny zavatra mpitsindroka, AutoCAD dia nanasongadina ny hevitra isan-karazany mifandraika amin'ny rafitsary izay afaka teboka mifanaraka amin'ny zavatra iray hafa.
Manindry ny laharana faharoa nofidiana ho olom-pehezina mifandray amin'ny laharana voalohany.
Ny kofehy dia misy boribory, boribory ary ellipses mba hizara ny afovoan'ilay singa voalohany nofantenana.
Amboary ny toerana misy teboka iray voafaritra, ny toetoetran'ny sifotra iray dia azo alaina na mihetsika.
Manova ny endriky ny zavatra faharoa izay napetraka amin'ny toerana mifanohitra amin'ny zavatra voalamina voalohany. Voafaritra ihany koa izy io amin'ny filazana fa ny andalana dia tsy maintsy mitazona ny làlan-dàlana mitovy amin'ny object reference. Raha voafaritra ny segondra misy polyline, dia io no miova, fa tsy ny ampahany amin'ireo segondra amin'ny polyline.
Manery ny tanjona faharoa ho laharam-pahamehana amin'ny voalohany. Izany hoe, mba hamolavola ny mari-pahaizana 90 miaraka aminy, na dia tsy voatery ho voakasika aza ireo zavatra roa ireo. Raha ny tanjona faharoa dia polyline, dia ny sanda miavaka ihany no miova.
12.1.7 Horizontal sy Vertical
Ireo fameperana ireo dia mametraka tsipika iray amin'ny toerana misy azy amin'ny orthogonal. Na izany aza, manana safidy iray antsoina hoe "teboka roa" ihany koa izy ireo, izay ahafahantsika mamaritra azy ireo dia ireo teboka ireo eo amin'ireo dia tsy maintsy mijanona orthogonal (miorka na miorka, miankina amin'ny teritery voafidy) na dia tsy mitovy amin'ny zavatra iray aza izy ireo.
Miasa roa ny fitaovana entina hilalao. Mazava ho azy, ny iray amin'ireo zavatra roa ireo dia tsy maintsy ho lasa lavaka.
Ny hery dia tsiranoka mba hitazonana ny fitohizan'ny lany amin'ny zavatra hafa.
Manery ny tanjona tokana hijanona ho marika amin'ny iray hafa momba ny zavatra iray fahatelo izay manasaraka azy.
12.1.11 Ny fitoviana
Mifanaraka amin'ny halaviran'ny tsipika na ny laharam-pampandrosoana mifanaraka amin'ny andalana na segondra hafa. Raha ampiharina amin'ny zavatra mitongilana, toy ny faribolana sy arcs, dia mitovy ny radia.
Previous Post«Previous TOKO 12: FITSARANA PARAMETRIKA
Next Post Fananana avy amin'ny fahazarana vao hainganamanaraka »
Valiny iray ho an'ny "12.1 Faneriterena geometrika"
Raul Manuel Perez Arroyo hoy izy:
Ataovy ireo horonantsary afaka mamaky azy ireo ary avelao izy ireo ao amin'ny solosainay azafady